फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - उदास मुद्रामा रक्सी पिउँछु
उदास मुद्रामा रक्सी पिउँछु विमल निभा
मित्रहरू हो, म त्यति रक्सी पिउँदिनँ । तथापि यस मामलामा बदनाम छु । मलाई अपार कष्ट केमा छ भने म जति रक्सी पिउँछु, यसको तुलनामा बेसी नै बदनाम छु । मेरो रक्सीपियाइ र बदनामीको कुनै वास्तविक तालमेल बनेको छैन । त्यसउसले यसको यथोचित मिलान होस् भन्ने कामना गर्नु कदापि नाजायज होइन ।
यतिचाहिँ निर्धक्क भन्छु, आरम्भमा म लुकी–लुकी रक्सी पिउने गर्थें । केही समयपछि यो स्वत खुला भयो । मजस्तो अकिञ्चन टाइपको रक्सी पिउने मनुवाले के लुकाउने ? त्यसबखत बडेबडे नेताहरू खुलमखुला रक्सी पिउन थालेका थिए । मेरो जिल्लाका तत्कालीन देब्रे ढल्कुवा र दाहिने ढल्कुवा नेताहरूका नाम राजनीतिक कर्मभन्दा रक्सी पिउनुमा नै बढ्ता थियो । म त सानोतिनो समर्थक थिएँ । आज पनि छु । जे होस्, रक्सी पिएर मलाई घाटाचाहिँ भएन ।
यसमा प्रशस्त खतराको सम्भावना छ । विशेषत रक्सी पिएको बखत । यस बखत मेरा मित्रहरू मित्रताको सीमारेखामा बसिरहने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यो मैले भोगिसकेको यथार्थ हो । यस्तो व्यर्थको जोखिम नउठाउनु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।
म रक्सी प्रसंगमा आफ्ना मित्रहरूका नाम नलिने विचारमा थिएँ । तर लेखनको बाध्यतावश लिनुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । र, यसका साथसाथै म के पनि भन्छु भने यी जम्मै नामहरू पूरै काल्पनिक हुन् । अत वास्तविकतासँग यसको कुनै पनि प्रकारको लेनदेन छैन । कदाचित कसैसित मिल्न गएमा अग्रिम क्षमायाचना गर्छु ।
अत ‘बोस’ को आँखा छलेर रक्सी पिउनुपथ्र्याे । र, यसरी नै उताबाट पनि ‘आँखाछलाई’ को काम भूमिगत तवरले भइरहेको थियो भने हामीलाई थाहा हुने कुरै थिएन । अब थाहा भएको भए पनि यतिका वर्षपश्चात् यसको के अर्थ छ ? जे भए पनि हमीले सँगसँगै बसेर आनन्दपूर्वक रक्सी पिउने सौभाग्य कहिल्यै प्राप्त गरेनौं । यही पार्टीबाट आएका नेता कमरेडका निर्देशनबमोजिम मेरा मित्रहरू सम्पादकीय लेख्थे, जिल्ला–जिल्लाबाट आएका फुटकर समाचार छाप्थे र समसामयिक तिखो कार्टुन कोर्थे । म भने स्तम्भ लेखनमा संलग्न थिएँ । मेरो स्तम्भको शीर्षक थियो– देब्रेकुना ।
मित्रहरू हो, धेरै पहिले घटित एक रक्सीसम्बन्धी कुराको छ्वास्स उल्लेख अप्रासंगिक होइन । यसको ठोस कारण छ । हामी त्यसबखत गलत रक्सी पिइरहेका थियौं त ! वस्तुतः कुरो यसभन्दा विस्तृत किसिमको छ । त्यही भन्छु । यतातिर के थाहा भयो भने हाम्रो रक्सी गलत मात्र नभएर विलकुलै अपवित्र पनि थियो ।
याद रहोस्, यो विशुद्ध क्रिश्चियनधर्मी ‘होली वाइन’ कार्यक्रमको प्रमुख संयोजक पहिलेका नेकपा एमाले र अहिलेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाल थिए । पवित्र रक्सीका स्वदेशी प्रस्तोता । र, हेर्नाेस् मेरो दुख, यता हाम्रा ठूला–ठूला कम्युनिस्ट नेता कमरेडहरूले पवित्र रक्सी पिउन थालेका छन् भने मेरो रक्सीपियाइचाहिँ स्वाट्टै घटेको छ ।
कन्तिपुर, पुस २१, २०७५